Ukholifulawa | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Indlela yokukhulisa ukholifulawa: imithetho kanye namathiphu
Ukwandisa i-cauliflower emasimini asekhaya akuthandwa kakhulu njengoba iklabishi evamile evamile. Isizathu salesi simo ngokwezinga elikhulu ukungabi nolwazi lwabalimi mayelana nokuthi kungenzeka kanjani ukwandisa iklabishi ezinjalo ngezimo ezipholile, nokungafuni ukukhohlisa ngezitshalo ezingaziwa.
Yazi kahle izinhlobo eziyinhloko zeklabishi
Iklabishi sekuyisikhathi eside yaziwa isintu futhi ingenye yezinto ezidliwa kakhulu. Emvelweni, kunezinhlobo ezingaphezu kwamashumi ayisihlanu zalesi semifino. Ngezinhlobo ezithandwa kakhulu iklabishi, izithombe zabo namagama azofakwa kulokhu kulesi sihloko. Белокочанная Isiko esivamile kakhulu nesithandwa kakhulu emaceleni ethu.
Sihlwanyela ukholifulawa on izithombo
Ukutshala imifino efana nekholifulawa akulula kakhulu ezimweni zethu zezulu. Kodwa-ke, ukwazi izici zokunakekelwa nokugcina wonke ubuchwepheshe obudingekayo bokutshala nokukhula, ungazijabulisa wena nabathandekayo ngeklabishi enhle kunazo zonke futhi enempilo. Izinhlobonhlobo ezinhle kakhulu ze-caulifulawa Ukholifulawa ucebile amavithamini C, A, B, E, D, K, H, U kanye nezinye izinto ezinjengama-amino acids, ama-carbohydrate, isitashi, i-fibre, i-pectin, ama-acids aphilayo, ushukela wemvelo, amaprotheni, i-polyunsaturated acids, i-biotin, i-purine compounds.
Ikholifulawa ewusizo futhi eyingozi
Ukholifulawa imifino ebaluleke kakhulu. Igama layo aliveli kulokho ukuthi linemibala, kodwa ngoba liqukethe ama-inflorescences. Kubizwa nangokuthi "i-curly", ngoba uhlobo lwalolu hlobo lweklabishi luyisimangaliso ngempela. Mayelana nezinzuzo zekholifulawa zomzimba isikhathi eside aziphikisana, ngakho-ke namuhla ithatha indawo efanelekile yokuhlonipha ekudleni kwansuku zonke.
Indlela yokulungisa ukholifulawa ebusika
Imifino enhle kunayo yonke engadini yethu i-cauliflower. Izimbali zalo zizohlobisa noma yikuphi isidlo, ikakhulukazi uma zihlanganiswe ne-broccoli. Futhi akufanele ngisho nokukhuluma mayelana nokunambitheka okukhulu nezinzuzo zalo mifino, ngoba iqukethe izikhathi eziningi ezisebenzisekayo kunezihlobo zayo zeprotheni. Ukuba nokuvuna okuhle, ngifuna ukuyigcina isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
Indlela yokulungisa ukholifulawa ngesiKorea ebusika
Ukunambitheka okunamnandi, okulula okubabayo kobufulawayizi isitayela saseKorea kugcwalisa ngokuphelele inyama noma inhlanzi, ngakho-ke bambalwa kakhulu abantu abanqabe ukugcina imbiza yale saladi ekhrispy. Ngempela, akuyona nje into ehlwabusayo, kodwa futhi iyasiza: ama-inflorescences ane-curly aqukethe amavithamini amaningi kanye nama-microelements, futhi ukusetshenziswa okuvamile kwe-cauliflower kunomthelela ekulahlekeni kwesisindo, kuthuthukisa izinqubo zokugaya nokusebenza kwenhliziyo, futhi kunikeza nokuvimbela umdlavuza.